မငြိမ်သက်မှုသို့ ထပ်မံခြေလှမ်းပြင်နေသော ဘာသာခြား ထိမ်းမြားခြင်း ပိတ်ပင်ချက်
ဇှနျ ၃, ၂၀၁၄ - ၉:၃၆ နံနကျ
News Code : 613194
မြန်မာအစိုးရမှ လှစ်ဟလိုက်သည့် ဥပဒေကြမ်းမှာ ဘာသာရေး အမုန်းတရားများ ကိန်းအောင်းလျက်ရှိသည့်အပြင်၊ ချိုးနှိမ်ခံ မွတ်စ်လင်မ်လူနည်းစုတို့အပေါ် တစ်ဆင့်တက် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ဝေဖန်သုံးသပ်သူများက ဆိုသည်။
ဓါတ်ပုံအညွှန်း-၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ အတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မျိုးစောင့် ဥပဒေ ပြဌာန်းပေးရန် အစိုးရကို ဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့သည့် မ.ဘ.သ အဖွဲ့ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာကြသော ရှင်ဝီရသူနှင့် ဘုန်းကြိးများ
လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ဇူလိုင်လတွင် အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သံဃာတစ်စုမှ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုချက်ပေါ် မူတည်၍ ဥပဒေကြမ်းလေးမျိုး အသံထွက်လာ၏။ ၎င်းတို့ဖြင့် အခြားသော စည်းမျဉ်းများထက် ဘာသာကွဲ ထိမ်းမြားမှုနှင့် ဘာသာ ကူးပြောင်းမှုအပေါ် ထိန်းချုပ်ရန် တွန်းအားပေးထားသည်။
စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှ ဆယ်စုနှစ် များစွာနေခဲ့ရပြီး ပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူများစုနှင့် မွတ်စ်လင်မ် လူနည်းစုအကြားရှိ တင်းမာမှုများမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားကတည်းက မြင့်မားနေလျက်ရှိသည်။ အင်အား အတန်ငယ်ကြီးမားသော ဗုဒ္ဓအမျိုးသားရေး ၀ါဒီများ၏ ဂိုဏ်းဂဏတစ်စုမှာ ဖျက်ဆီး တိုက်ခိုက်လိုစိတ်ကြီးမားနေကြောင်း ဝေဖန်ခံထားရ၏။
အမျုိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဟု သိကြသော သံဃာအဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်၏ အဆိုပြုချက်မှ ထွက်ပေါ်လာသော ပထမဥပဒေ မူကြမ်းကို နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများတွင် အင်္ဂါနေ့က ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ လူထုသဘောထားကို ဇွန်လ ၂၀ ရက်တွင် ကောက်ယူမည်ဟုလည်း ဆိုထားသည်။ ယင်းအဆိုပြုဥပဒေအရ မည်သူမဆို ဘာသာကူးပြောင်းလိုပါက ပြည်တွင်းအာဏာပိုင် အမျိုးမျိုးထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်ဖြစ်သည်။
မွတ်စ်လင်မ်တို့အပေါ် ပစ်မှတ်ထားခြင်းလော ?
ယင်းဥပဒေမှာ ဘာသာတရား အားလုံးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဟုဆိုသည့်တိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေသည့်နိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ် သာသနာပြန့်ပွားမှုအား ကာကွယ် တားဆီးရန် အကြွင်းမဲ့ ဦးတည်ထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး အုပ်စုများ၊ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများက ယုံကြည်နေကြသည်။
“ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ဦးတည်ဆန့်ကျင်ဖို့ ရည်ရွယ်တာပါပဲ။ ဒီဥပဒေမူကြမ်း အားလုံးနီးပါးက မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ပစ်မှတ်ထားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတယ်။ ဒီလူနည်းစုဝင်ဘာသာတရားအပေါ် အမုန်းတရားနဲ့ အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်သင်းသင်းအောင်မှ ပြောကြားသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ဘာသာခြားထိမ်းမြားမှု ကန့်သတ်ရေးဥပဒေအား ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေသည့် အမျိုးသမီးမဟာမိတ် အုပ်စုများအနက် အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
ဘာသာခြားထိမ်းမြားမှုဥပဒေ မူကြမ်းအား ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း မရှိသေးချေ။
သို့သော် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖွဲ့နှင့် အခြားအဖွဲ့များအဆိုအရ ၎င်းတို့သည် အဆိုပြု ဥပဒေမူကြမ်းကို တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသားများနှင့်သာ ထိမ်းမြား ခွင့်ပြုကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးကို ထိမ်းမြားလိုသူ မည်သူပင်ဖြစ်စေ ထိုသူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်း ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတို့သားသည် သတို့သမီးမိဘများ၏ သဘောတူညီခြင်း ထောက်ခံရေးသားချက်ကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထည့်သွင်းထား၏။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သူ မည်သူမဆို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အား လက်ထပ်ထိမ်းမြားပါက ဥပဒေချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ကျခံစေရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖွဲ့က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏လမ်းစဉ်သည် ပျက်စီးရေးလမ်းကြောင်းလော ?
Fortify Rights လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ မက်သယူး စမစ်က “ ယင်းသို့သော ဥပဒေအမျိုးအစားမှန်သမျှ မွတ်စ်လင်မ်တွေနေရာရလာမှာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ မလိုလားဘူးဆိုတဲ့ အသံကို တရားဝင်ထုတ်ပြန် လိုက်ရာရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ ခွဲခြားချိုးနှိမ်မှုပါပဲ။ ယခုအခါ မြန်မာပြည်က ဥပဒေပြုအမတ်တွေဟာ အလားတူဥပဒေမျိုးကိုသာ စဉ်းစားနေကြတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်း ဂယက်ရိုက်ခတ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စ်လင်မ် ဆန့်ကျင်ရေးခွဲခြား ချိုးနှိမ်မှုဟာ ခန့်မှန်းရခက်လောက်အောင် မြင့်တက်နေပါပြီ ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေး ဒု-၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကမူ ပြဋ္ဌာန်းချက် အဆင့်မရောက်သေးသော ဥပဒေကြမ်းပါ အချက်အလက် မှန်သမျှနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ကြေးမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။
“ ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ကော်မတီအနေနဲ့ သူတို့ လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်ရှိတဲ့ ပြည်သူ အားလုံးရဲ့အမြင်နဲ့ သဘောထားကို စဉ်းစားသုံးသပ်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် အတွင်း ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းထဲက ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ် သုံးသပ်စဉ်းစားသွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အခြားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး သဘောတူညီချက်တွေကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု သူက ဆို၏။
အမျိုးဘာသာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသော အခြား ဥပဒေကြမ်းများကို မကြာမီ ထုတ်ပြန်ဖော်ပြမည်ဖြစ်၏။ ၎င်းတို့အနက် ဇနီးတစ်ဦးထက် ပိုယူခြင်းနှင့် အိမ်ထောင်စု ဦးရေအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များလည်း အပါအ၀င်တစ်ခု ဖြစ်ရာ မွတ်စ်လင်မ်ဦးရေ တိုးပွားမှုကို တစ်ဖက်သတ် ထိန်းချုပ်ရေးအား ရည်ရွယ်ထားကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး အုပ်စုများ၏ အဆိုအရ သိရသည်။ လူဦးရေပမာဏ သန်း ၆၀ ခန့်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၌ မွတ်စ်လင်မ်တို့မှာ ၅ % နီးပါးသာရှိသည်ဟု ခန့်မှန်း တွက်ဆထားကြသည်။
ယင်းဥပဒေမူကြမ်းကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သော် နိုင်ငံအတွင်း ခွဲခြားခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်ခြင်း ထပ်မံဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ်ပါကြောင်း ဒေါ်သင်းသင်းအောင်က အောက်ပါအတိုင်းပြောပြ၏။
“ ကျွန်မတို့ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအရ ခွဲခြားပိုင်းခြားမှုဒဏ်ကို ခံနေရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အစပျိုးကာလထဲမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီ(ဥပဒေမူကြမ်း)က တစ်ယူသန်မှုနဲ့ ခွဲခြားချိုးနှိမ်မှုကို ပိုမို ဦးတည်စေပါလိမ့်မယ် ”။
Burma Campaign UK ၏ ဒါရိုက်တာ Mark Farmaner ကလည်း ယင်းအဆိုကို သဘောတူပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာကောင်းများကို ပေါ်ပေါ် တင်တင် မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုလ်ရာရောက် လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
“ (ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး) လူနည်းစုဝင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာလူမျိုး ကြီးစိုးထားတဲ့ ဗဟိုအစိုးရဟာ သူတို့ကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေလိုတာလား၊ သို့မဟုတ် အစ,ဖျောက်ပစ်လိုတာလား ဆိုပြီး သံသယ၀င်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာခြားထိ မ်းမြားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေက ဘာသာကွဲ လူနည်းစုဝင်တွေရဲ့သောကကို အရှိန်အမြင့်ဆုံး တွန်းတင်ထားတယ်။ အာဏာပိုင်အစိုးရက ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတို့ရဲ့နိုင်ငံအဖြစ် တိုင်းပြည်ကို အမြင်ထားရှိရင် လူမျုိုးကွဲဘာသာကွဲ လူနည်းစုဝင်တွေအပေါ် တန်းတူရည်တူ စဉ်းစားပေးမှာ မဟုတ်တော့လို့ပါပဲ ”။
ဘာသာခြားထိမ်းမြားမှု ဥပဒေအား မိမိတို့အုပ်စုမှလည်း ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုဥပဒေသည် အမျိုးသမီးများ၏ လွတ်လပ်စွာ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ခွင့်ကို ချိုးနှိမ်ထားကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနေခြင်းကို နောက်ပြန်လှည့်စေသည့် ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ထိမ်းမြားမှု အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မည်သည့် အချက်အလက်မှ မပါဝင်ကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရေးမှာ လိုအပ်ချက် မဟုတ်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးနှင့် မွတ်စ်လင်မ် အမျိုးသားတို့၏ ထိမ်းမြားမှုများမှာ ရှောင်ဖယ် မရနိုင်သော အထူးတဆန်းဖြစ်စဉ်လည်း မဟုတ်ကြောင်း ဒေါ်သင်းသင်းအောင်မှ ပြောပါသည်။
“ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို ထိမ်းမြားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီး ဦးရေဟာ စိုးရိမ်စရာကောင်းလောက်တဲ့ အထိ ကျွန်မ မတွေ့ရပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့ ခရစ်ယာန်အကြားက ထိမ်းမြားမှုတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အထူးတဆန်း မဟုတ်သလို ယေဘူယျအားဖြင့် ပြဿနာတစ်ရပ် အနေနဲ့လည်း မမြင်ကြပါဘူးရှင် ”။
လူမဆန်သည့် ဒုစရိုက်များလော ?
ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းဒေသများရှိ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စ်လင်မ်တို့အပေါ် ချမှတ်ထားသော အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကလေးနှစ်ဦးသာယူရေး မူဝါဒကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ပြယုဂ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဝေဖန်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ရိုဟင်ဂျာနှင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့အကြား လူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားသည့် အဓိကဒေသဖြစ်ပြီး၊ သောင်းနှင့်ချီသော မွတ်စ်လင်မ်များအား အိုးအိမ်စွန့်ကာ ဒုက္ခသည်စခန်းများ အတွင်းသို့ အဓမ္မမောင်းသွင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုနေရာဝယ် ၎င်းတို့သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီ ရိက္ခာများကိုသာ လုံးလုံးလျားလျား အားထားနေကြရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အကျယ်ပြန့်ဆုံး ကူညီပေးနေသော နယ်စည်းမထားဆရာဝန်များ အဲန်ဂျီအိုအဖွဲ့၏ ပြည်နယ်တွင်း လှုပ်ရှားလည်ပတ်ဆဲ လုပ်ငန်းစဉ်ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ရိုဟင်ဂျာများကို မျက်နှာလိုက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်း ဟူ၍ အာဏာပိုင်များက စွပ်စွဲခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။
ယင်းသို့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့်လုပ်ရပ်သည် လူမဆန်သောဒုစရိုက်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်လုံလောက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသအထူး သံတမန် သောမတ်စ် အိုယေး ကင်တားနားက ပြီးခဲ့သည့်လ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြပ်လေ့လာမှုအဖွဲ့က “မျိုးသုဉ်းရှင်းလင်းမှု” အဖြစ် ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာ အာဏာပိုင်များကမူ ထိုအဆိုအားလုံးကို ပယ်ချထားပေသည်။
“ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မျိုးသုဉ်းရှင်းလင်း သုတ်သင်ရေးအပေါ် တားဆီး ကာကွယ်မှုတာဝန်ကို အစိုးရဖက်က လျစ်လျူရှုပျက်ကွက်နေကြောင်း အဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီအရာ(မျိုးစောင့်ဥပဒေ)လိုမျိုးကို အတည်ပြုလိုက်ယုံနဲ့ အဲ့ဒီကအခြေအနေ အထောက်အကူပြုစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ” ဟု စမစ်က ဆိုသည်။
ဥပဒေကြမ်းများ အတည်ပြုလိုက်မည်လော ?
လူမျိုးဘာသာအခြေတည် မျိုးစောင့်ဥပဒေကြမ်းလေးရပ် စလုံးကို ယခုလတွင် အပြီးသတ်ရေးဆွဲပြီး လူထု သဘောထားရယူရန် ထုတ်ပြန်တင်ပြမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ၏ အဆိုအရ ဇွန်လ ၃၀ ရက်တွင် အချောသတ်ကာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံတင်ပြသွားမည်ဟု သိရ၏။
ယင်းအဆိုပြုဥပဒေ မူကြမ်းများကို လူတစ်သန်းကျော်၏ထောက်ခံလက်မှတ်ရရှိထားကြောင်း အမျိုးဘာသာ သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့က ကြွေးကြော်ထားသည်။ ထိုသူတို့အား ဆန့်ကျင်ပြောဆိုသူမှာ လက်တစ်ဆုပ်စာမျှသာ ရှိနေသည်။ အတည်ပြုနိုင်ချေ အားကောင်းနိုင်သည့်အပေါ် အတိုက်အခံများကလည်း စိုးရိမ်လျက်ရှိကြ၏။
“ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ မွတ်စ်လင်မ် ဆန့်ကျင်ရေးရောဂါထမှု အပေါ် ပြည်တွင်းလူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ တော်တော်များများပင်လျှင် ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေနေကြတယ်။ ပင်တိုင် အတိုက်အခံပြုထုတ်ဖော်ပြောကြားတာဆိုလို့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေသာ ရှိနေကြတယ် ” ဟု Farmaner က ဆိုသည်။
သံဃာများ၏ နာမ်ပိုင်း လွှမ်းမိုးမှုက ယင်းဥပဒေများအား ကန့်ကွက်ရန် အခက်တွေ့စေကြောင်း၊ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူ အမျိုးသမီးစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်များမှာ လက်သီးပုန်းအ စွန်းရောက်သမားတို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို အဆက်မပြတ် ခံနေကြရကြောင်း တင်ပြသည့် ဒေါ်သင်းသင်းအောင်က အောက်ပါစကားကို ရင်ဖွင့်ပြောကြားခဲ့ပေသည်။
“ သံဃာတွေပြောသလို လူများစွာက လိုက်လုပ်ကြတယ်။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ကို သစ္စာဖောက်တွေလို့ သမုတ်ကြပါတယ်။ (ဒီလိုကန့်ကွက်ဖို့ကိစ္စက) သာမန်လူတွေအနေနဲ့ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုဖို့ဆိုတာ ခဲယဉ်းလွန်းလှတယ်လေ ”။
မူရင်း – CNN မှ Tim Hume ၏ Fears of new unrest as Myanmar ponders monk-backed interfaith marriage ban ဆောင်းပါး
ပြန်ဆိုသူ – မြင့်မိုရ်မောင်မောင်